खण्ड १२ – मण्डली – Word of Truth, Nepal
खण्ड १२ – मण्डली
एफेसी १:२२-२३ मा मण्डली ____________________ हो भनेर परिभाषित गरिएको छ।
एफेसी ५:२२-३३ अनुसार ख्रीष्टियन पतिले ख्रीष्टको चित्रण गरेको पाइन्छ भने म__________को चित्रणचाहिँ ख्रीष्टियन पत्‍नीले गरेको पाइन्छ।
मण्डलीका निर्माता को हुनुहुन्छ (मत्ती १६:१८)? ______________
ठीक कि बेठीक मानिसहरूलाई मण्डलीमा थप्ने र यसको वृद्धि गर्ने जिम्मेवारी ख्रीष्टियनहरूको हो (प्रेरित २:४७ र १ कोरिन्थी ३:६-७)।
मण्डलीको जग र चट्टान __________ हुनुहुन्छ (१ कोरिन्थी ३:११)।
ठीक कि बेठीक प्रेरित पत्रुसले मण्डलीको मुख्‍य कुनाढुङ्गा ख्रीष्ट नभएर आफू नै भएको विश्वास गर्दथे। १ पत्रुस २:५-७ पढ्नुहोस्; स्मरण होस्, यो लेख्‍ने पत्रुस आफैं थिए।
मत्ती १६:१८ अनुसार येशूले भन्नुभयो: क) मैले आफ्नो मण्डली बनाइसकें। ख) म आफ्नो मण्डली हालै बनाउँदैछु। ग) म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु (भविष्यमा)। घ) म आफ्नो मण्डली कहिल्यै बनाउनेछैन।
ठिक कि बेठीक प्रभु येशूले मत्ती १६:१८ को कुरा गर्नुहुँदा मण्डलीको निर्माण कार्य शुरू भइसकेको थियो।
ठीक कि बेठीक दुष्टताको शक्तिहरू एक दिन मण्डलीमाथि विजय बन्नेछन् (मत्ती १६:१८)।
आज बाँचिरहेका नयाँ गरी जन्मेका विश्वासीहरूमध्ये कतिजनाचाहिँ ख्रीष्टको शरीरको अङ्ग भएका छन् (१ कोरिन्थी १२:१२-१३)? ______
मण्डलीको निम्ति ख्रीष्टले के गरिदिनुभयो (एफेसी ५:२५)? ______ ________________________
ठीक कि बेठीक विश्वासीहरू ख्रीष्टलाई आदर गर्ने साथै परमेश्वरको वचनलाई विश्वासयोग्यसित सिकाउने स्थानीय मण्डलीहरूमा एकसाथ भेला हुनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो (हिब्रू १०:२५; प्रेरित २:४२)।
ठीक कि बेठीक शुरूको मण्डलीमा परमेश्वरको वचन (शिक्षा-सिद्धान्त) र प्रार्थनालाई थोरै मात्र ध्यान दिइन्थ्यो (प्रेरित २:४२; ६:४)।
ठीक कि बेठीक पावलका धेरै पत्रहरू विभिन्न शहरहरूमा अवस्थित मण्डलीहरूलाई सम्बोधन गरिएका थिए (१ कोरिन्थी १:२; गलाती १:२; १ थेस्सलोनिकी १:१ आदि)।
ठीक कि बेठीक आत्मिक रूपमा स्वस्थ रहने, बढ्दै जाने, आफ्नो जीवनद्वारा ख्रीष्टलाई दर्शाउने व्यक्तिहरूले उहाँका स्थानीय मण्डलीहरू बनेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ (एफेसी ४:११-१६)।
ठीक कि बेठीक ख्रीष्टको शरीरका हरेक विश्वासी परमेश्वरको वचनको सत्यतामा राम्ररी सिकाइएको हुनुपर्दछ (कलस्सी १:२८)।
परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई मानिस तथा स्वर्गदूतहरूका सामु दर्शाउँदै उहाँको महिमा गर्नु नै स्थानीय मण्डलीको उद्देश्य हो। विश्वासीहरूको स्थानीय शरीर स्वस्थ रहँदै बाइबलीय नमूनाबमोजिम क्रियाशील बन्ने क्रममा (एफेसी ४:११-१६; १ तिमोथी ३:१-१६) परमेश्वरले आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा, मण्डलीद्वारा निम्न कुराहरू प्रकट गर्नुहुनेछ:
____ उहाँको जीवन
____ उहाँको बुद्धि
____ उहाँको सामर्थ्य
____ उहाँको प्रेम
____ उहाँको महिमा
____ उहाँको सत्यता
____ उहाँको अनुग्रह
क) एफेसी ३:१०
ख) एफेसी २:७
ग) एफेसी ३:२१
घ) कलस्सी १:२७; गलाती २:२०
ङ) १ तिमोथी ३:१५
च) एफेसी ३:२०
छ) यूहन्ना १७:२२-२६
परमेश्वले आफूलाई संसारसमक्ष चिनाउनलाई चुन्नुभएको भाँडो मण्डली हो। आज संसारमा परमेश्वरको साक्षी र सक्रियताको केन्द्र नै स्थानीय मण्डली हो। विश्वासी जन बाइबल विश्वास गर्ने एउटा असल मण्डलीसित सही ढङ्गमा आवद्ध हुनु आवश्यक छ।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-14 14:25:232020-11-04 11:57:00खण्ड १२ – मण्डली
खण्ड ११ – सेवाकार्य तथा आत्मिक...खण्ड १३ – विधिहरू